Semalt बाट गाईड गर्नुहोस्: कसरी तपाईंको फोनमा आउने सबै स्प्यामको साथ डिल गर्ने
टिंग टिंग। तपाईंले भर्खर एउटा सन्देश प्राप्त गर्नुभयो। तपाईंले अखबार तल राख्नुभयो, तपाईंको ट्राउजरको पकेटमा खन्नुहोस् र तपाईंको मोबाइल फोन बाहिर निकाल्नुहोस्। आरेग। तपाईं फ्राउन। तपाईं यस्तो केहि पढ्नुहुन्छ: 'वास्तविक रोलेक्स वाच, %०% बन्द'। तपाईंले प्रेषकको संख्या जाँच गर्नुभयो यो आशा गर्दै कि यो कोही तपाईंलाई चिनेको हो र तपाईंले महसुस गर्नुभयो कि तपाईंले पहिले कहिल्यै देख्नु भएको छैन। तपाईंलाई स्पाम गरिएको छ।
जूलिया वाश्नेभा, Semalt वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक, भन्छन् कि आज, स्मार्टफोन अन्धाधुन्ध विज्ञापन अभियानको लागि एक लक्ष्य भएको छ। कहिलेकाँही प्रेषक वैध व्यवसाय हुन सक्दछ (जसलाई तपाईंले राजीखुसीले आफ्नो नम्बर दिनुभयो) तर प्राय: जसो तिनीहरू फर्जी नम्बरहरूबाट आएका छन् नक्कली उत्पादनहरू र / वा प्रस्तावहरू। तपाई सोच्न सक्नुहुन्छ कि यो विकसित विक्रेता अभियान हो। तिनीहरू कष्टप्रद छन्, तर तपाईं तिनीहरूलाई ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि स्प्याम मात्र असुविधा हो भने, त्यसोभए तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ कि यो अवैध हो। संघीय व्यापार आयोग (FTC) ले भनेको छ कि यो कुनै पनि अनावश्यक व्यावसायिक सन्देश एक वायरलेस उपकरण (पेजर र सेलफोन सहित) लाई पठाउन अवैध छ जबसम्म प्राप्तकर्ताले त्यस्ता सन्देशहरूको लागि छनौट गर्दैन। यो हो, त्यहाँ केहि गलत छैन यदि तपाइँ नियमित रूपमा कुराकानी गर्नुहुन्छ एक संस्था तपाइँलाई इन्फोमेरियल्स पठाउने तपाइँको अनुमति माग्छ भने। कानूनले तथापि, सर्वेक्षण र राजनीतिक सन्देशहरू जस्ता गैर व्यावसायिक सन्देशहरूलाई छुट दिन्छ।
यदि तपाईंले पहिले कहिल्यै सुन्नु भएन भने इन्टर्नेटबाट सन्देशहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले के गर्नुपर्दछ? ठिकै छ, त्यहाँ राम्रो अवसर छ उनीहरूले कानून तोड्दैछन्। डेटाको लागि फिशिंग गर्ने संगठनको सम्भावना पनि अस्वीकार गरिनु हुँदैन। यदि तपाइँ तपाइँको पिन वा पासवर्ड को लागी अनुरोध गरी एक पाठ सन्देश प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो खराब छ।
प्रेषकको नम्बर रोक्नुहोस्
यो स्प्यामबाट छुटकारा पाउनको लागि सब भन्दा सजिलो र सरल विधि हो। तपाईको मनपर्ने सन्देश अनुप्रयोगमा प्रेषकलाई रोक्नुहोस्। चाखलाग्दो कुरा, प्रेषकलाई थाहा छैन कि तपाईंले तिनीहरूलाई ब्लक गर्नुभयो। एन्ड्रोइड उपकरणमा, शीर्ष दायाँ कुनामा तीन ठाडो थोप्लाहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। "व्यक्ति र विकल्पहरू" चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि "रोक्नुहोस्"। एक आईफोनमा, तीन बिन्दुहरूको सट्टामा नम्बर अवरोध गरेर समाप्त गर्नुहोस्।
तपाईंको सेवा प्रदायकलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्
तपाईं प्रेषकलाई अवरुद्ध गर्नमा सन्तुष्ट हुन सक्नुहुन्छ तर फेडरल ट्रेड कमिशनले आपत्ति जनाउदैन यदि तपाईंले नागरिक कर्तव्य प्रदर्शन गर्नुभयो भने: गलत कार्य रिपोर्टिंग। मोबाइल सेवा प्रदायकको बावजुद, तपाईं स्प्यामरलाई उत्तरदायी बनाउनको लागि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यस्ता केस रिपोर्टि casesको लागि तपाईंको नेटवर्कमा समर्पित विशेष नम्बर फेला पार्नुहोस्। यदि अधिक व्यक्ति स्प्यामरहरू विरूद्ध लड्न एक साथ आएका थिए भने, संसारले थोरै कष्टप्रद स्प्याम सन्देशहरू देख्नेछ।
आउनुहोस् एउटा परिदृश्य लिनुहोस् जसमा तपाईं स्प्याम सन्देश पछाडिको व्यक्ति को हो भनेर पत्ता लगाउन तपाईको आग्रह छ। के यो तपाईंको समयको लायक हुनेछ? सायद होईन। संभावना छ कि तपाईं कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुहुने छैन। यहाँ विचार सरल छ। प्रेषकसँग अन्तर्क्रिया गर्नु राम्रो विचार होइन। तपाइँको उत्तम शट उनलाई ब्लक गर्न र / वा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।
सावधानीको शब्द। पाठ सन्देशमा प्रदान गरिएको कुनै पनि लिंकमा क्लिक नगर्नुहोस्। यसका अतिरिक्त तपाईको इ-मेल खाताहरूका लागि कुनै अनुरोधलाई जवाफ नदिनुहोस् लगईन विवरणहरू, क्रेडिट कार्ड विवरण वा अन्य कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी।